Top 2 Siyaabaha Bedelka Playlists ka iPhone in Lugood
2 Siyaabo Sahlan ee Suuqa Playlists ka iPhone in Lugood
Sidee ayaan playlists aan ka iPhone dhaqaaqo Lugood? My computer burburtay, sidaa darteed waa inaan si bilaabin isticmaalka PC ka duwan syncing aan iPhone. Waxaan haystay oo dhan oo aan raalli ka computer hore, laakiin ma playlist ah. Markii aan synced aan iPhone in computer cusub, heshay digniin leh u masixi doono content on my iPhone. Ma doonayo in aan iska playlist ah, fadlan ku caawin!
Sida la shaqayn jiray ee kor ku xusan, waxan rabaa in playlists ka iPhone wareejiyo maktabadda Lugood? OK, kaliya aynu u samayn. Halkan ayaan daboolay 2 xal u su'aasha sida loo playlists ka iPhone wareejiyo Lugood:
Xalka 1: playlists Nuqul ka iPhone in Lugood caqligiisu
Solution 2: playlists Import ka iPhone in Lugood via Lugood
Copy playlists in Lugood caqligiisu
Playlists Import in Lugood via Lugood
Halkan waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto sida ay u playlists ka iPhone wareejiyo Lugood leh TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu kaa caawin doonaa inaad playlists ka iPhone wareejiyo Lugood gabayo, ciyaaro dacwadood, ratings, iyo Macluumaad dheeraad ah, kuwa aan marnaba dhalin karo dhibaatada aad aragtaan playlist ee Lugood laakiin ma ciyaari karo. Oo waxaan idin ​​ku hubin karnaa in sidan waa 100% jirta. Waa kuwan tallaabooyinku.
Click Download to download TunesGo Wondershare oo ku xidh on your computer. Waxaa isla markiiba Launch. Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Marka xiran si guul ah, waxaad ka arki kartaa daaqadda Wondershare TunesGo u eg shaashadda dhinaca midig
Tallaabada 2. Import playlist ka iPhone in itune
Haddii aad isticmaalayso Wondershare TunesGo (Mac) si playlists ka iPhone wareejiyo Lugood on Mac, waa in aad guji Music dhanka bidix. Markaas xakameeyo guji playlist dhinaca midig. Dooro dhoofinta in Lugood si ay u gudbiyaan aad playlist iPhone in aad Mac. Haddii aad isticmaalayso Wondershare version TunesGo Windows, guji Playlists dhinaca bidix ee suuqa. Dooro playlists doonayay oo guji-xagalka xagga hoose ku dhoofinta in button. Riix dhoofinta in Lugood Library si loo bilaabo nidaamka wareejinta.
Lugood dhab ahaantii waxay bixisaa fursad u ah in aad playlist ka iPhone wareejiyo Lugood. Waxaa kale oo aad u fudud. Marka aad ku xidhi kartaa iPhone la your computer, oo aad samayn kartaa. Si kastaba ha ahaatee, khataraha weli ka jiraan in ka dib markii playlists dayanayaan ka iPhone in Lugood aad, waxay u muuqataa galeeysid ee Lugood, laakiin ma waxaad ka heli kartaa info ama heeso iyaga in. Si looga fogaado xaaladda, fadlan hubi in heesaha oo dhan in playlists ayaa sidoo kale ka jira aad Lugood Library. Haddii aan, isku day in aad sida ugu kale.
Burcad aad Lugood Library, sidoo kale aad Mac ama PC. Riix Lugood View menu dooro Show galeeysid . Oo isticmaasho iPhone USB cable in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Markii ay ku xiran tahay, waxa aad ka arki kartaa iPhone hoos AALADAHA galeeysid ah.
Tallaabada 2. Transfer playlists ka iPhone in Lugood
Riix saddexagalka ayan ku iPhone u muujiyo maktabadda aad iPhone. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa oo dhan playlists ku saabsan iPhone. Dooro playlist ah oo xaq guji ku yaal (users Mac waa xakameeyo u riix) dooro dhoofinta. In uu furmo suuqa keenay in, ay doortaan qaab faylka sida oo ahaa XML taas oo ah qaab default u Lugood playlist iyo badbaadin on your computer.
Tallaabada 3. Import iPhone playlists in Lugood
Riix Lugood File menu iyo dedeg Library> Import Playlists . Daaqadda ee dhawaanta la furay, heli dooro playlists iPhone aad dhoofiyo si aad u computer ah. Iyaga Add to your Lugood Library. Ka dib markii playlists iPhone ka iPhone wareejiyo si aad Lugood Library, waa in aad hubiso in ay tahay jirta ama aan. Haddii aan, waxay ka dhigan tahay heesaha qaarkood ma aha in aad Lugood Library. Xaaladdan oo kale, waa inaad ku xusan si kale oo lagu playlists ka iPhone wareejiyo Lugood gabayo.
Video Tutorial: Sidee si ay u gudbiyaan Playlists ka iPhone in Computer
Ka iPhone Bedelka Wax walba si Transfer PC
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Lugood
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan playlist ka iPhone in Lugood ee PC